Serivisy aorian'ny fivarotana - voafetra ny fetra elektrika HONG KONG SAUL.
Guarantee miverina amin'ny vola 30 andro
Tianay ianao ho afa-po tanteraka amin'ny zavatra rehetra izay ividiananao amin'ny www.ebuyplc.com. Raha manana olana kalitao ny vokatray ary tsy afa-po amin'ny entana novidinao ianao dia azonao atao ny mamerina ilay entana ao anatin'ny 30 andro aorian'ny datin'ny kaomandy ho famerenam-bola feno ny vidin'ny fividianana, mihena ny fandefasana, ny fikirakirana na ny fiampangana hafa mifandraika amin'izany.
Ny garantien miverina mandritra ny 30 andro dia tsy mihatra amin'ny entana rehetra. Ireo entana ao anaty tahiry ihany no azo ekena amin'ny fiantohana vola 30 andro.
Ny vokatra dia tsy maintsy averina amin'ny fonosana orinasany am-boalohany amin'ny toe-javatra tsara, fanjakana tsy ampiasaina sy tsy misokatra ary miaraka amin'ny taratasy sy kojakoja rehetra mba hahazoana antoka fa feno ny trosa.
Ny politikam-pandefasan'i Saoly amin'ny fandefasana dia ny mpanjifa no tompon'andraikitra amin'ny fiampangana entana sy ny fandoavana sarany rehefa mamerina ny vokatra any amin'i Saoly, ao anatin'izany ny vokatra naverina tamin'ny fiantohana ny vola 30 andro.
Azonay antoka tanteraka fa ho afa-po amin'ny vokatra amidinay izahay satria izy ireo dia vokatra 100% tena izy sy tena izy. Azontsika antoka satria ambany dia ambany ny tahan'ny fandoavambola anay.
Na izany aza, manome antoka izahay fa TSY MAINTSY ny famerenam-bola ho an'ny orinasa mandritra ny 30 andro raha sanatria. Raha tsy afa-po tanteraka ianao dia mandefasa mailakasales5@xrjdcs.com.